तेह्र प्रतिशतमा हात्तीपाइले रोगको सङ्क्रमण
नेपालगञ्ज, १३ फागुन । बाँके जिल्लामा यही फागुन १५ गतेदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइँदैछ ।
नवौं चरणमा खुवाउन लागिएको सो औषधि यसपटक भने स्वास्थ्यकर्मीले नै खुवाउने भएका छन् । यही फागुन १५ गते हरेक वडामा तोकिएका बुथमा औषधि खुवाइने छ भने १६ गतेदेखि २६ गतेसम्म घरदैलो अभियान गरेर औषधि खुवाइने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केशवराज गौतमले बताए ।
अघिल्ला वर्षमा महिला स्वास्थ्य स्वमंसेविकाबाट औषधि खुवाउने गरिएकामा सो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो वर्ष स्वास्थ्यकर्मीबाटै औषधि खुवाउने रणनीति बनाइएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार बाँकेमा यसवर्ष पाँच लाख ८८ हजार २७८लाई औषधि खुवाउन ३६८ स्वास्थ्यकर्मी खटिने जनाइएकोे छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सघाउन ७८९ महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका खटिने भएका छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालयकी दुर्गा गौतमले आठौंचरणसम्म औषधि खुवाउदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएका कारण यो पटक स्वास्थ्यकर्मीबाटै औषधि खुवाउँदा स्थानीयवासी विश्वस्त र आश्वस्त हुने सोचेर नयाँ रणनीति अपनाइएको बताए ।
अघिल्ला अभियानमा औषधि सेवनबारे गलत धारणा, शहरी क्षेत्रमा औषधि सेवन प्रगति न्यून हुनेलगायत चुनौती सामना गर्नुपरेको बताइएको छ ।
बाँकेको कूल पाँच लाख ८८ हजार २७८ जनसङ्ख्या रहेकामा करीब १३ प्रतिशतमा हात्तीपाइले रोगको सङ्क्रमण रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ‘क्युलेक्स क्याङ्किफेसिएटस’ नामक लामखुट्टेले हात्तीपाइले रोग सार्ने गर्छ । रोग निवारणका लागि ‘डिइसी’ र ‘अलबेण्डाजोल’ नामक औषधि खुवाउँदै आइएको छ । दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सात दिनको सुत्केरी महिला र दुई वर्षमुनिका बालबालिका बाहेक सबैले यो औषधि सेवन गर्न मिल्ने जनाइएको छ । रासस
बच्चाको दिमाग तेजिलो बनाउन गर्भवती महिलाको खानपानमा समावेश गर्नुस् यी खानेकुरा
शनिबार थपिए ७० कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १६७१९
शुक्रबार थपिए ११८ कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १६६४९
मनसुनमा यसरी हराउन सक्छ कपालको चमक, अपनाउनुस् यी टिप्स्
बिहीबार थपिए १०८ कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १६५३१
यसरी घरमा नै सम्भव छ पेडिकेयर !
अमेरिकी वैज्ञानिकले पत्ता लगाए भाइरस रोक्ने औषधी
कसरी फैलन्छ हावाबाट कोरोना संक्रमण ?
बुधबार नयाँ कोरोना संक्रमित र निको हुनेको संख्या झण्डै बराबर
बुधबार थपिए २५५ संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १६४२३
मंगलबार थपिए २०४ संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघ्यो
लक्षणबिनाका कोरोना संक्रमितलाई ज्यानको खतरा
सोमबार थपिए १८० संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १५९६४
गर्मी मौसममा उखुको रस पिउनुहोस् र शरीरलाई स्वस्थ राख्नुहोस्